Dad badan oo lagu xirxiray dalka Turkiga - BBC News Somali
Dad badan oo lagu xirxiray dalka Turkiga
Image caption Millatariga oo la xirayo
Ilaa 2,839 askari oo Turki ah oo ay ka mid yihiin saraakiil sare oo ayaa loo xiray isku daygii afgambiga oo hadda dhamaaday sida uu sheegay Rai’sal wasaaraha dalkaas Bin Cali Yildirim.
Wuxuu sheegay in ay dhinteen 161 ruux 1,440 ay ku dhaawacantay habeen uu ku tilmaamay bar madaw oo fuushay dimuqraadiyadda Turkiga.
Qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay magaalada Ankara, Istanbul iyo meelaha kaleba xalayto.
Kumanaan dad ah ayaana adeecay baaqii madaxwayne Erdogan ee ahaa in ay diidaan oo ka hor tagaan dadka inqilaabka raba.
Askar Turki ah oo Giriiga iska dhiibay
Dawladda Giriig ayaa sheegtay in ay xirtay sideed nin oo dalkeeda ku soo gashay diyaarad millatari oo ah kuwa qumaatiga u kaca.
Diyaaraddaasi ayaa ku soo dagtay magaalada Alexandroupolis oo ku taala dhanka waqooyi.
Dadkaas ayaa Giriiga ka codsaday magangalyo siyaasadeed.
Laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in dawladdiisu ay waydiisan doonto in loo soo celiyo.
Garyaqaanno la xiray<span >
In kabadan 2700 oo garyaqaan oo dalka oo dhan ka kala shaqaynayay ayaa shaqada laga eryay.
Wakaalad warar oo ay dawladdu maamusho ayaa sheegtay in ay calaaqad la lahaayeen Fethullah Gulen oo ah Sheekh Maraykanka dibad joog ku ah.
Dawladdu waxay sheegtay in iskudaygii afgambiga dhicisoobay ay ka dambeeyeen qayb ka mid ah millatariga oo daacad u ah sheekhaas.
Ma cadda cidda ka dambaysay afgambigaas
Madaxwayne Rajab Dayib Erdogan ayaa ku tilmaamaysae “nidaam kuwan la mid ah” kaas oo uu si cad ula jeedo wadaad Fettllah Gulen la dhoho oo ah wadaad ku sugan dalka Maraykanka, kaas oo uu ku eedeeyay in uu hurinayo daganaansho la’aan.
Image caption Kumannaan qof ayaa taageero u muujiyay dowladda Turkiga, iyaga oo isugu soo baxay Istanbul, Ankara.
Si kastaba ha ahaatee qoraal uu soo saaray Gulen ayuu ku diiday in uu wax lug ah ku leeyahay dhacdadan, wuxuuna sheegay in uu si wayn u cambaaraynayo afgambiga dhicisoobay ee Turkiga.
Erdogan oo sheegay in uu isagu dalka ka taliyo
Madaxwaynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogan ayaa ka soo muuqday magaalada Istambul isaga oo diiday in uu wax afgambi ah ka dhacay dalkiisa.
Ciidammo hubaysan ayaa markii hore sheegay in ay la wareegeen xukunkii.
Waxaase la arkay Madaxwaynaha oo ay ku hareeraysan yihiin taageerayaal soo dhawaynaya.
Isaga oo si toos ah uga hadlay Telefeshin ayuu sheegay in isku dayga afgambigu uu yahay "khayaano qaran".
Erdogan ayaa sheegay in kuwa ka dambeeyay afgembiga u muuqda inuu dhicisoobay, ay muteysan doonaan ciqaab adag.
Image caption Qaar ka mid ah shacabka ayaa taangiyada u diiday in ay socdaan
Ra’iisul wasaaraha dalkaasi, Binali Yildirim, ayaa sheegay in xaaladda dalka ay “inta badan gacanta ugu jirto dowladda” kaddib markii ay qeyb ka mid ah milateriga sheegeen in ay la wareegeen xukunka dalka.
Wuxuu amray in la soo rido diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay adeegsanayaan dadka doonaya afgambiga.
Image caption Dadka taageersan xukuumadda ee isu soo baxay.